Hoggaamiye noqo - haddii aad isku aragtay 10-kan astaan ee wanaagsan
Home Aragti-doon Hoggaamiye noqo – waa haddii aad isku aragtay 10-kan arrimood ee wanaagsan
Hoggaamiye noqo – waa haddii aad isku aragtay 10-kan arrimood ee wanaagsan
"Hoggaamiyaha wanaagsan ee dhabta ah, wuxuu aad u taageeraa cadaaladda." Sidee adiga u noqon kartaa? Raac arrimahan.
Hoggaamiyaha wanaagsan ee meeshan ka dhex muuqda ma tahay? - Credit - Getty Images
Sida lagu ogaaday cilmi-baaris uu sameeyay machadka OCCMundial, boqolkiiba 60 dadka xirfadaha leh waxay jecel yihiin in maamule ama hoggaamiye noqdaan.
Sidoo kale waxay u arkaan in hoiggaamintu tahay qabashada xil sare oo dad ka kale kaa sareysiinaya.
Waa dhab, hoggaaminta waa xil sare oo maamul ama bixinta amarro lagugu xushmeynayo.
Sidoo kale waxaa qeyb ka ah in aad galangal ku yeelato shaqada muwaadiniin ama koox ku sugan hal goob oo shaqo.
Qofka hoggaamiyaha ah wuxuu sidoo kale hubiyaa in shaqada ay si wanaagsan u socoto iyo in lagu guuleysto yoolalka iyo ujeedooyiinka la hiigsanayo.
Haddaba waxaa muuqato in hoggaamiyaha uusan ahayn maamule oo keli ah, balse uu yahay qofka laga doonayo in uu gaaro go’aanno xikmadeysan oo waqtiga ku habboon ku soo aada.
Haddaba, hoggaamiyeyaasha oo dhan sidaa uma dhashaan. Qaarkood waxay ka bartaan khibradda ay helaan inta ay korayaan ama ay shaqeynayaan. Adigana waad ka mid noqon kartaa.
Waxaa jira fikir kale oo qaba in hoggaamintu ay tahay xirfad rabbaani ah oo aan dib laga baran karin.
Haddaba haddii aad leedahay 10 kan astaan, waxaad tahay hoggaamiye wanaagsan:
Aqoon ma u leedahay hoggaaminta?: Dabcan, waxa ugu horreeya ee hoggaamiye laga doonayo waa in uu aqoon buuxda u leeyahay arrimaha ku saabsan hoggaminta iyo mamulka. Waa in aad garaneyso sida wax loo saadaaliyo, loogana hortago dhibaato iyo in aqoontaada aad la wadaagto dadka kale.
Naftaada ma aaminsan tahay: Hoggaamiyaha dhabta ah wuu garanayaa waxa uu hibada u leeyahay iyo xirfaddiisa, wuuna garanayaa waxa ka xaddidan. Taasi waxay fududeyneysaa in qofka uu gaaro go’aan wanaagsan, isagoo aan shaki ka qabin.
Ma tahay qof daacad ah oo sharafna leh?: Hoggaamiyaha wanaagsan waa qof daacad ah oo cadaalad sameeya. Waa qof hadalkiisa iyo ficilkiisa ay is leeyihiin, oo aan isbedelin mar kasta. Waa qof si xushmad leh ula dhaqma dadka ku hareereysan ee la shaqeeya ama kuwa kaleba. Xitaa dhanka diinteenna waa lagu ammaanay hoggaamiyaha caddaaladda wax ku xukuma, abaalmarinna wuu leeyahay oo maalinta qiyaamaha wuxuu ka mid yahay toddobada ruux ee harsaneysa harshiga Alle.
Ma tahay qof mar kasta la heli karo oo dabacsan?: Qallafsanaan iyo macangegnimo qeyb kama noqon karaan shaqada hoggaaminta. Haddaba hoggaamiyaha waa in uu yahay qof la heli karo oo dabacsan, kana shaqeeya fududeynta howlaha shaqo iyo qaabka loo sameynayo iyo in uu keeno istiraatiijiyad muhiim ah oo xilligeeda ku soo beeganta.
Ma qaadataa wixii masuuliyad kaa saran tahay?: Hoggamiye kasta oo wanaagsan wuu garanayaan sida ay saameynta u leeyihiin caqabadaha – ha samaadaan ama ha xumaadaane – ee ka dhasha ficilkiisa. Sidoo kale isla weyninka meel ayey iska dhigaan, raalli gelinna way bixiyaan, marka ay muhiimka tahay.
Dadka wax ma ka siisaa masuuliyaddooda iyo guulaha?: Hoggaamiyeyaasha wanaagsan waxay qeybiyaan awoodooda iyo masuuliyadda saaran, umana arkaan in ay halis ku tahay shaqadooda. Dadka waxay u oggolaadaan in ay khibrad u yeeshaan xilalka. Waxay og yihiin in ay muhiim tahay in shaqaalaha lagu dhiirrigeliyo in ay sare u soo kacaan, si wada jir ahna loogu dabbaaldego guulaha.
Ma tahay qof naxariis badan?: Waa in aad dadka aad madaxda u tahay la leedahay xiriir dhanka qalbiga ah, oo aad dareento dhibka haysta. Waa in aad u naxariisato, kana damqato dhibkooda. Waa in aad baahidooda buuxisaa, xal na u heshaa waxa ay kaa dalbadaan.
Jawaab celin ma siisaa dadka, shaqada ka dib?: Qor qaladaadka iyo guulaha ay gaaraan dadka kula shaqeeya ama madaxda aad u tahay – waana in uu noqdaa qoraal xushmad iyo tixgelin ah. Sidoo kale adigana waa in aad dhageysataa jawaab celintooda iyo sida ay wax u arlkaan marka ay ka hadlayaan sida aad wax u waddid.
Mudnaan ma siisaa qaabka aad ula xiriireyso dadka kale?: Hoggaamiyaha wanaagsan wuxuu eegaa sida uu dadkiisa ula hadlayo, wuxuuna ka fakaraa fursadaha horumarka oo loo siman yahay.
Wax kasta ma qorsheysataa?: Hoggaameyaha fiican wuxuu leeyahay awood oo uu wax kasta ku qorsheeyo si uu u helo istiraatiijiyad uu yoolkiisa ku gaari karo.
Previous articleIsagoo hurdaya ayuu shaqeystay $16,000 – qaabkan ayey u dhacday
Next articleNoocyada cudurada dhimirka ee saameyn kara qof kasta